Miss Earth Myanmar 2017
Grand Final အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲ
Miss Earth Myanmar 2017 Grand Final အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲကို ဇွန်လ ၂၄ ရက် စနေနေ့ ညနေ ၆ နာရီ၌ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Channel9TV Channel မှ Live ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Tree planting activities!
Miss Earth Myanmar Organization မှ မယ်မြေကမ္ဘာအလှမယ်များ မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ပူပေါင်း၍ ပဲခူးရိုးမတောင်ပေါ်၌ ဂုဏ်ယူပျော်ရွှင်စွာ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။
ပရဟိတသူရဲကောင်းအမျိုးသမီးများ ဖြစ်လာရန်အတွက် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်မှ သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း
မယ်မြေကမ္ဘ္ဘ္ဘာအလှမယ်များ ပရဟိတသူရဲကောင်းအမျိုးသမီးများဖြစ်လာရန်အတွက် မည်သို့ လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို ပရဟိတသူရဲကောင်းအမျိုးသမီးဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်မှ ဂိလာန ဘိုးဘွားရိပ်သာ၌ အတွေ့အကြုံကောင်းများ လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲအတွက်မဟုတ်ပဲ တစ်ကမ္ဘ္ဘ္ဘာလုံးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံတကာနှင့်အညီ တန်းတူရင်ဘောင်တန်း လုပ်ဆောင်ရန် ပထမဦးစွာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားမျှဝေ အပြန်အလှန် မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပုံ
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ်လောင်းများသည် Power Rangerနှင့် အခြားသောပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းများ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများတို့နှင့် အတူ ပူးပေါင်း၍ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ရွေးချယ်ခံ အလှမယ်လောင်းများသည် ကမ္ဘာမြေကြီး စိမ်းလန်း စိုပြေရေး အတွက်၂နှစ် တာဝန်ယူ
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ်လောင်းများ၏ ရိုးရှင်းသောအချိန်များကို ကမ္ဘာမြေကြီး သာယာလှပ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး အတွက် ပေးအပ်လိုက်ပါသည်။ အလှမယ်လောင်းများသည် Miss Earth Myanmar Organization မှ ရွေးချယ်ခံရပြီး တာဝန်ပေးအပ်ပြီး ဖြစ်ပါက ၂ နှစ် တိတိ ကျေကျေပွန်ပွန် တာဝန် ထမ်းဆောင်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Story Telling Programs To Children အစီအစဉ်အတွက် လေ့ကျင့် ပြောဆိုနေစဉ်
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ်လောင်းများသည် ကားပေါ်တွင် မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်နေရင်း မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း လုပ်ဆောင်ရမည့် Story Telling Programs To Children အစီအစဉ် အတွက် လက်တွေ့ ပြသ လေ့ကျင့် ပြောဆိုနေသည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါသည်။
Shopping Mall Tours!
စည်းကမ်းတကျ အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းဖြင့် ကူညီပေးကြပါရန် Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ်လောင်းများက ဈေးဝယ်ကုန်တိုက်များရှေ့တွင် လိုက်လံ နှိုးဆော်ခဲ့ကြပါသည်။
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ်လောင်းများ၏ စုပေါင်း အမှိုက်ကောက်ခြင်းသည် တစ်ကြိမ်ထဲ ပြီးဆုံးသွားမည် မဟုတ်ဘဲ အမြဲအတူ လက်တွဲ ပူးပေါင်း၍ အစဉ်အမြဲ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ပူးပေါင်း ပါဝင် လိုသူများ ကြိုတင်စာရင်း ပေးထားနိုင်ပါသည်။
Learning how to play Golf @ PanHlaing GolfClub
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ်လောင်းများအား "ဂေါက်သီးရိုက် အားကစား" ကစားနည်းကို လက်တွေ့ကစားစေခဲ့ပြီး ကစားနည်း၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ဆန်ခါတင်(၂၇)ဦးအား စာနယ်ဇင်း ဆရာ၊ဆရာမများထံ မိတ်ဆက်အပ်နှံပွဲ အခမ်းအနား
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အလှမယ်လောင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်အခန်းကဏ္ဍများကို TV Channelမှ သတင်းမီဒီယာ၊စာနယ်ဇင်းဆရာဆရာမများအား သတင်းပေးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
Donation To Aye Myitta Disable Center
The MissEarth Myanmar Organization handed its donation to the Aye Myitta Disable Center and Myanmar Christian Fellowship for the Blind during the final screening of candidates for this year's competition.